Kulamule umlawuli befuna kuphume iMeya – Bayede News
Kulamule umlawuli befuna kuphume iMeya
ILANYULELWE ilungu lenhlangano i-African Christian
Posted on 02/08/2019 07/08/2019 by Bayede-News
UMnu Sibusiso Sithole Umlawuli
ILANYULELWE ilungu lenhlangano i-African Christian Democratic Party (ACDP) iMeya yaseMsunduzi uMnu uThemba Njilo emva kokuba amalungu eDemocratic Alliance (DA) efune ukuba yehle esikhundleni ngokuphazima kweso ethi awasabuthembi ubuholi bayo.
Lokhu kwenzeke emva kokuba iMeya yethule umbiko wezinhlelo phambi komkhandlu emhlanganweni obungoLwesithathu. Ikhansela leDA uMnu uSbongiseni Majola uthe kuyamangaza ukuthi kulon mbiko akukho nokukodwa okuthinte ukusetshenziswa kwezimali, kunalokho ikhulume ngezinto ezingabalulekile kangako okwenza bangabe besabuthemba ubuholi bayo. Emva kwale nkulumo uMajola ube esecela iMeya ukuba ibeke phansi izintambo njengoba sekukuningi osekwenzekile okwenza abantu babungabaze ubuholi bayo.
Elinye ilungu lale nhlangano uMnu uRoss Strachan naye unanele ngokuthi uyamesekela uMajola njengoba ukuhluleka kweMeya ukudala ubumbano phakathi kwamaqembuqembu akhona ngaphansi kwalo mkhandlu kukhombisa ngokusobala ukuthi umsebenzi wokuba umholi uyamhlula. UStrachan ugcizelele ukuthi kubalulekile ukuthi iMeya isule manje , isithunzi sayo singaze sehle kakhulu emphakathini. USomlomo uNks uJabu Ngubo obesadidekile ucele ukuba anikwe isikhathi ukuze athole izeluleko zomthetho ukuthi kumiswa kanjani uma kunje.
Ikhansela le-ACDP uMnu uReinus Niemand ube esefunda inqubomgomo elandelwayo uma umholi ehliswa esikhundleni ngoba engasethenjwa, athe i-DA ayinalo ilungelo lokwenza lokhu njengoba umthetho uthi kufanelwe kuqale kubhalwe incwadi, kungabi yinto esuka esithubeni nje.
Ilungu lesigungu esiphezulu kulo Mkhandlu uMnu uSphamandla Khumalo uthe kube yiphutha kwasekuqaleni ukuba uNiemand aseke umbono ongekho ohlwini lwezinto okuzobhungwa ngazo kulo mhlangano. Uthe inqubomgomo ithi uma kuzokwenziwa isicelo esinjengalesi kufanele isicelo sifakwe kuqala ehhovisini likaSomlomo. ISekela leMeya uMnu uThobani Zuma libe selicela incazelo kuNiemand yobuqembuqembu akhuluma ngabo, naye oziphendulele ngokuthi lena yimibiko eqhamuka kwamanye amalungu omkhandlu nabezindaba.
Lesi sigameko sisuse ukuhhumuzela phakathi kwamakhansela e-ANC naweDA njengoba awe-ANC abethi i-DA nayo kumele izinuke amakhwapha njengoba ngaphansi kwalo Mkhandlu kunamakhansela amane asulile, okukhombisa ngokusobala ukuthi kunezinkinga zobuholi nakhona.
UMlawuli wedolobha uMnu uSbusiso Sithole ube esekhuza ukuthi lomhlangano usuthanda ukunhlanhlatha njengoba kungasakhulunywa izinto eziseqhulwini zosuku. Uthe abantu abakhumbule ukuthi abalawulwa kuphela yinqubomgomo yokuhola omasipala, kodwa kukhona noMthetho iStructures Act okuyiwona olawula ukuthi umuntu ususwa uma sekunjani futhi ngaphansi kwaziphi izimo.
Lo Masipala oholwa yi- African National Congress (ANC) sekunesikhathi kwabikwa izinkinga kuwo. Ukufakwa kwawo ngaphansi koMlawuli kwaba yisinqumo esathathwa esithathwa yiSigungu Sokuphatha Sesifundazwe nesiholwa nguNdunankulu kulandela isincomo somnyango owelusa ukusebenza nokuphathwa koMasipala Izimpawu zokufadala kwawo zaqala ukubonakala emuva kokhetho lowezi-2016.
Amalungu omphakathi nezinhlangano zepolitiki bake baola lo Masipala ngokungazidlulisi izidingo emphakathini kubandakanya ukungcola kwedolobha. Muva nje abasebenzi bophiko lwezimali bake babeka amathuluzi phansi. Amanye amalungu omphakathi asola uMasipala ngokwehlukela ukuba nohlelo olusebenzayo lokuqoqa izikweletu. Lolu hlelo lwethulwa ngowezi-2016 kuthiwa lwabiza uMkhandlu izigigi ezingama-R90. Olunye udaba olwavela ukungaqoqwa kwemfucuza neshiya idolobha ‘lixathuka’. Kepha okwaba yinkamba beyibuza kulo Masipala ngumbiko womcwaningimabhuku nothe loMasipalala usuwehlele ezingeni elibi kakhulu usuka kuleleo elibekezelekayo onyankenimali wezi-2017/18. Okwabalulwa yilo mbiko kube ukungakwazi ukuhambisana nomthetho osemqoka, ukuphathwa budlaka kwezimali, ulawulo lwezangaphakathi olubuthaka Kanye nokubibikho kokuphatha ngokunikezelana. Ehambele eMgungundlovu ngaphambi kokhetho uMengameli Cyril Ramaphosa naye ashaya amakhala ngehlazo alifice emigwaqeni yalapha. Wayehamba emazwini esililo seminyaka sabakhokhi bentela ngokungagqitshwa kwemigodi emigwaqweni, ukungalungiswa kukagesi ongakhanyi nesimo esihlasimulisayo sokhula nesikhotha emapaki, onqenqemeni lwemigwaqo nasemathumeni, amanye awo aphakathi kwemigwaqo emikhulu engenela eNhlokodolobha.
Ukwehluleka kwabaphathi ukulawula lo Masipala kugqame kakhulu ngezingqinamba zabasebenzi ezihlale obala ngokwehluleka ukukhipha izitatimende eziqondile zikagesi, amanzi namarate obekukhalwa ngokuthi ziyazinhlanhlathela nje. Okwakucasula abaningi ngukuqinisa kukaMasipala isandla ekucisheleni imizi nosomabhizinisi ngaphandle kokuqikelela ukuthi izitatimende zemali ekweletwayo ziqondile yini.